१७ वर्षपछि बल्ल मलेसियासँग नेपालको श्रम सम्झौता, शून्य लागत कार्यान्वयन होला ? « GDP Nepal
१७ वर्षपछि बल्ल मलेसियासँग नेपालको श्रम सम्झौता, शून्य लागत कार्यान्वयन होला ?
Published On : 29 October, 2018 6:28 am
काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान थालेको १७ वर्षपछि आज दुई देशबीच श्रम सझौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ ।
श्रम सम्झौताका लागि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान आइतबार नेपाल आएका छन् । सम्झौतापत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।
झन्डै १५ लाख नेपाली कामदारले रोजगारी पाइसकेको मलेसिया नेपालका लागि उपयुक्त श्रम गन्तव्य भए पनि आम्दानीका दृष्टिले भने आकर्षक नभै औषत रोजगारदाता मुलुक हो ।
यता, मलेसिया र नेपालबीच सोमबार हुने द्विपक्ष्ीाय श्रम समझदारी (एमओयू) सँगै खुल्ने निश्चित भएको छ । मलेसिया जाने नेपाली युवासँग विभिन्न बहानामा शुल्क उठाएको जनाउँदै सरकारले तत्कालका लागि नेपाली युवा मलेसिया नपठाउने निर्णय गरेको थियो ।
यससँगै ६ महिनापछि वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मलेसियामा पुनः रोजगारी सुचारु हुने भएको छ ।
मलेसिया जाने कामदार रोकिएसँगै दुवै देशले पटकपटक छलफल गरी एमओयू गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली युवाका लागि मलेसिया पुनः खुल्ने भएको हो ।
पटकपटकको छलफलपछि असोजमा नेपालले सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएर श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको थियो । सोही मस्यौदाका आधारमा दुई देशका मन्त्रिहरूले विशेष समारोहबीच काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई देशबीच हुने एमओयूपछि मलेसिया जाने कामदारमाथि लाग्दै आएको सेवा सम्बन्धि विभिन्न किसिमका सिन्डिकेट तोडिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
यस्तै, दुई देशबीचको समझदारीले बायोमेट्रिकका नाममा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब मलेसिया जाने नेपालीलाई रोजगारदाताले नै भिसा, आतेजाते हवाई टिकट, मेडिकल खर्च र सेवा शुल्कको रकम समेत बेहोर्नेछन् ।
मंसिरमा व्यवसायमा सुधार, ५४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असारको तुलनामा २०७७ मंसिरमा उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा सुधार आएको
निजी क्षेत्र कृषिमा विदेशी लगानीको पक्षमा, सरकारी नीतिको घुमाउरो ढंगले स्वागत
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठन नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र